Imfashini Isikhokelo sokuthenga
Indlu inxulumene nathi ngenduduzo kunye nobudlova, kwaye oku kuququzelelwe yimpahla yekhaya, apho unokuziva ukhululekile, ukhululekile. Kodwa, enxibe iingubo zasekhaya zabesifazane, nayiphi na ibhinqa ifuna ukukhangeka, ngoko ke kulolu hlobo kukho izicwangciso zeklasi kunye nezoqobo.
Iintlobo zeengubo zokugqoka zabasetyhini
Ezi zambatho zekhaya zenza imisebenzi emininzi:
kuba into oyitshintshayo xa ufika ekhaya, okanye, empeleni, iingubo zokusebenza ezilungiselelwe ukupheka, ukucoca;
Ukukhonza njengempawu zokuhlambela, ebeka kuphela emva kokuthatha ishawa;
ukwenza inxaxheba yento encinci epholileyo, apho kuyamnandi ukugqoka nokufunda ngaphambi kokulala okanye ukusela itiye elimnandi;
ncedisa i- negligee okanye igumbi lokulala .
Ngokuxhomekeke kwinjongo yengubo yasekhaya yowesifazane, zixutywe kwiingubo ezahlukeneyo:
Iingubo zokugqoka ezigqibeleleyo zilungele ukuphuma kwindlu yokuhlambela kuyo yonke inkazimulo yayo - ayiyi kuvumela ukupholisa, ukuthatha umswakama, iyamnandi kwesikhumba;
i-bathrobe ehamba ngokugqithiseleyo ibhinqa ikulungele ukuphumla - ezinjalo izambatho zihle, zikwazi ukugxininisa umzobo, ziyakuthanda ukuthintela;
inketho yansuku zonke yokupheka nokubeka izinto ngendlela efanelekileyo ekhaya kwikotoni, i-bamboo bathrobe;
Isambatho esinobucayi kunye nesohlwayo sinokuthi "sinako" ukuba, xa senziwe ngelikalika okanye i-satin.
Unokukhetha njani isambatho esinokoqobo kunye nekhaya elihle lokugqoka umfazi?
Okokuqala, kufuneka uqonde ukuba ibhinqa elisembatho yokugqoka lingabonakala lihle. Ukongezelela, xa uthengela i-bathrobe, akufanele kube nefuthe elimnandi, elingenakuqhutyelwa okanye elibi, i-quil, ehlala entendeni yesandla sakho. Kubalulekile ukuba imibala eqaqambileyo yeengubo zasekhaya inokubangela ukucaphukisa kubantu abathandekayo, kwaye awunakho ukungahambi kakuhle, ngoko kufuneka ulahle imibala enjalo ngokuthanda abantu.
Okwangoku, ukhetho oluphezulu lweengubo zokugqoka zoluphi uhlobo lwentengo lunikezelwa, kodwa kulungile ukuba ukhumbule ukuba ingubo yinto enika yona kwintsapho yakho imihla ngemihla, ngokuqhelekileyo, isikhumba sesibini. Oku kuthetha ukuba akudingeki ugcine kuyo, kwaye awukwazi ukuyithenga ngokuthe ngangoko.
Ukuba ukhetha ukuhlala uhlala kumfudumalo, ukuba unomdla wokuthinteka kwamathande emzimbeni wakho, khetha i-home terry yokugqoka iingubo. Ngaphezu koko, nokuba ihlobo, ungathenga inguqu elula kunye nomkhono omfutshane. Ngokukodwa olu hlobo lweengubo zendlu lufanelekile amantombazana amancinci - imibala engaqhelekanga, ii-hoods, zonke iintlobo zeendlebe zifaneleke kakhulu kumafenethi atsha. Iindlu zeentombi zokugqoka iingubo zivame ukunyulwa ngabasetyhini abadala - zikwahluke ngokunyamekela, kwaye ngamanye amaxesha zibukeka ziluhlaza.
Ngokukhawuleza, iimfumba ze-bamboo zithandwa kakhulu. Kukholelwa ukuba bathabatha ngokupheleleyo umswakama, ngokukhawuleza owomileyo, abafumani umxhelo, banomfanekiso ofana nosilika. Ngoko ke, ukuba uxabisa ubuhle nakwiingubo zangasese, ke le ndlela yenzelwe wena.
Ukongezelela, akunakwenzeka ukuba ungakhankanyi iingubo zokuzihlamba zabesifazane. Eyona nto, ixhunyiwe kwi-knitwear, ayithengi, ngenxa yokuba bayathandwa ngabasetyhini. Enyanisweni, banemiphumo - izinto ezinjalo zilahleka ngokukhawuleza ifom yazo yokuqala.
Yiyiphi inqwaba yokukhetha?
Isambatho sinokubanjelwa ngamaqhosha, i-zipper okanye ibhanti. Izambatho ezenziwe ngabasetyhini kunye ne-zippers mhlawumbi zikhululekile kwaye ziyi-stylish. Ingxowa ayikuphazamisi, ikuvumela ukuba ukhawuleze okanye unqamle ingubo yakho yokugqoka. Izambatho ezizenzekelayo zokubhinqa abafazi abapheleleyo azivelwanga kuphela kule nguqulelo, kodwa kunye nebhanti, ukwenzela ukuba i-pussy ikwazi ukuzimela ngokuzimeleyo imo yayo, igxininise i-waistline, ngelixa liva ikhululekile. Ukugqoka iingubo kunye namaqhosha ukuya kwixesha elidlulileyo, uhlala unomdla wabantu abadala asebekhulile.
Iimodeli zeemfestile eziluhlaza
Iintambo zeDolce Gabbana
Iingubo zebhinqa zamabhinqa - imodeli yefashini kunye nento yokugqoka ngayo?
Umlobo omde obomvu
Ibhulukwe labasetyhini kunye nabaxhasi
Iimbopheleleko kwabasetyhini abakhulelweyo
I sweatshirt enoboya
Ingubo ephuzi ende
Gallbladder - ukutya
Ukutya kwi-pancreatic pancreatitis - imenyu yesampuli
Indlela yokuziphatha eTurkey?
INkosana uWilliam uhambise iPrince George ukuya esikolweni
I-Bursitis yamadolo kunye neempawu zonyango
Umququ ngebhola yengulube
Ukhuhlane nge-phlegm kwintsana
Ukutya okunempilo kakhulu kwihlabathi
Utamatisi ohlaza kwiimvumba ze-varicose
Ingubo yomtshato kwisimo selizwe
U-Scarlett Johansson uthetha ngokumelene nobudlelwane bomntu oyedwa
"Golden" umfanekiso we-Shakira uya kukhunjulwa ixesha elide
IiVithamini nge magnesium
Unyaka we-Dragon - iimpawu (umfazi)
Ukunakekelwa kwe-bamboo yangaphakathi
Tulips kwiibhotile zeplastiki
Iimpawu zoluntu-zengqondo zobuntu
Iimfuno ezimangalisa kwiinqwelo zeenkwenkwezi ze-biz, apho abaququzeleli beemakhonsathi bahamba khona